Rond-point Ankorondrano : Suspension des travaux depuis quelques jours - ewa.mg
News - Rond-point Ankorondrano : Suspension des travaux depuis quelques jours
Les usagers de l’axe Ankorondrano-Antanimena, Ankorondrano-Ambodivona ou encore Ankorondrano-Ivandry ont sûrement observé une suspension soudaine des travaux d’extension du rond-point en face de l’église Jesosy Mamonjy. Des travaux dont la rapidité des avancées a été agréablement remarquée par les observateurs contrairement à la réfection d’une portion de l’axe Ambodivona et sa lenteur. En effet, les engins ne sont plus présents sur le chantier depuis quelques jours déjà alors que les travaux semblent en avoir encore pour des jours. Les observateurs se posent alors des questions sur la continuité des travaux étant donné que cette extension aurait probablement des liens avec le nouveau plan de circulation mis en place par la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA). Ledit plan devant être opérationnel mercredi prochain si l’on s’en tient à la CUA.
L’article Rond-point Ankorondrano : Suspension des travaux depuis quelques jours a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Anisan’ny fanomezan-danja lehibe ho an’ny tontolon’ny soratra ny « Cercle littéraire ». Hetsika fanao ao amin’ny Ivontoeran’ny Kolontsaina malagasy Antsahavola, isaky ny asabotsy faharoan’ny volana. Hofaranana ny 15 desambra, manomboka amin’ny 2 ora tolakandro, ity atrikasa ity, ho an’izao taona 2018 izao. Anisan’ny tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoana ny tafatafa sy fifanakalozan-kevitra ny amin’ny nahitan’ny mpanatrika sy ny mpikarakara tao anatin’izay taona iray izao. Ahafahana manatsara ny ho fizotry ny amin’ny taona manaraka. Anisan’ny hitarika ny fifanakalozan-kevitra amin’izany i Michèle Rakotoson sy ry zareo avy ao amin’ny « Opération Bokiko ».Marihina fa noezahin’ny tompon’andraikitra hatrany ny hitondra zava-baovao sy lohahevitra vaovao niaraha-namakafaka tao anatin’izay taona iray izay. Anisan’izany ny lohahevitra niompana tamin’ny fandikan-teny, ny nanasana mpanoratra, ny vaky boky ifampizarana, sns.Ankoatra ny fifanakalozan-hevitra, hisy ny varotra boky sy fanaovana rango-tsonia (Dédicace). Afaka mitafa amin’ireo mpanoratra ho tonga eny an-toerana rahateo ny mpanatrika. Manasa ireo liana rehetra amin’ny tontolon’ny soratra sy ny boky, toy ny mpanoratra, ny mpianatra, ny mpikaroka, ny tompon’andraikitry ny sekoly, sns, ny mpikarakara.HaRy RazafindrakotoL’article Fanabeazam-boho ny soratra: hifarana ny « Cercle litteraire » a été récupéré chez Newsmada.
Noho ny asan’izy ireo…: nankahery ny Holafy fahefatra Vonjy Voina ny MDN
Isan’ireo Holafy misahana andraikitra goavana amin’ny fanaovana vonjy voina ny Holafy fahefatra Vonjy Voina na ny 4UPC Toamasina. Nametrahan’ny fanjakana fitokisana izy ireo manoloana ny asa notanterahin’izy ireo, toy ny famonjena olona tany Maroantsetra sy Mahanoro ary ny tao Mahajamba ny taona 2020. Nankahery ity holafy ity amin’izany asa izany ny minisitry ny Fiarovam-pirenena (MDN) nandritra ny fandalovany tao Toamasina sy nampahafantatra ny lehiben’ny Etamazaoron’ireo Tafika, ny Jly Sahivelo Delphin tamin’ny Holafy. Manan-danja ny 4UPC noho izy misahana mivantana ny fiarovana ny vahoaka manoloana ireo ambana marolafy toy ny tondra-drano, ny rivodoza, ny afo ary tamin’ity fiparitahan’ny valanaretina Covid-19 ity. “Mankahery anareo hatrany amin’ny fiatrehana ny adidy napetraky ny fanjakana aminareo amin’ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany”, hoy ny MDN. Nitohy tamin’ny fitsidihana ny tobin’ny Rezimanta faharoan’ny Jenia Miaramila, misahana ny asa fanorenana ao Toamasina ny dian’ireto manamboninahitra ireto. Tao amin’ny Toby Jly Jonah Joseph ny nisy ny fankaherezany ireo miaramila manaraka fiofanana mialoha ny handraisan’izy ireo ny asany amin’ny fampandriana fahalemana sy vonjy voina amin’ny loza voajanahary.Jean ClaudeL’article Noho ny asan’izy ireo…: nankahery ny Holafy fahefatra Vonjy Voina ny MDN a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – Nindrana baolina ny Barea: afa-baraka teo imason’izao tontolo izao ny Malagasy
Tsy mbola nisy ohatra ity, hatramin’izay nanaovana, hoy ny fitenenana. Tsy nanana baolina nanaovana fanazarantena ny Barea de Madagascar, tany Maraoka ka voatery nindrana. Afa-baraka ny firenena Malagasy ary aty amintsika ny mason’ny rehetra.Tsy fahaizana ve sa tsy fahazarana mandray andraikitra? Io no fanontaniana teny am-bavan’ny rehetra, omaly talata ary nameno ny tambajotran-tserasera, tamin’ny fanehoan-kevitra, nanoloana ny filazan’ilay mpanao gazety afrikanina, nitantara ny baolina nikatrohan’ny Etalons-n’i Borkina Faso sy Barea de Madagascar, ny alatsinainy alina teo. Nambarany fa tsy nanana baolina nanaovana fanazarantena ny ekipam-pirenena malagasy, tamin’ny fahatongavany tao Maraoka. Vokatr’izay, ny Borkinabe, mpifanandrina tamin’ny Barea no nampindrana izany, nanomanana tena nialoha ny fihaonan’ny roa tonta. Tsy indray mandeha tonga ny tsy fetezana fa teo koa ny tsy mbola fisian’ny “brassard”, ho an’ny kapitenin’ny ekipa. Mbola ry zareo federasiona borkinabe ihany no nanavotra ny Barea ka nanome izany.Ny mahagaga ny rehetra, nahatratra dimy be izao ireo mpikambana avy amin’ny komity mpitantana ny federasiona, nanaraka sy nanotrona ny Barea, tamin’iny lalao iny. Olona handeha hijery baolina fotsiny izany izy ireo fa tsy misy tompon’andraikitra misahana ny fitaovana. Fiarovantena avy hatrany ny setriny ka nolazaina fa taraiky tany anaty fiaramanidina ny baolina. Hatramin’izay, nisy hatrany ny tompon’andraikitra manokana tsy maintsy manaraka ny ekipa mikarakara izany.Tsy mahagaga raha toa ka ireny ny vokatra azon’ny Barea de Madagascar, satria tsy nitombina sy tsy nilamina ny sain’ireo mpilalao. Araka ny vaovao voaray hatrany, mbola i Nicolas Dupuis, mpanazatra aza no niangavy sy nanao fanelanelanana tamin’ny fahazoana ireo baolina 15, niatrehana ny fanazarantena, ny alahady.Andrasana ny fanazavana avy amin’ireo solontenan’ny federasiona nanara-dia ny Barea de Madagascar. TompondakaL’article Kitra – Nindrana baolina ny Barea: afa-baraka teo imason’izao tontolo izao ny Malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Andoharanofotsy: trano an-dalam-panamboarana nahitana basy sy bala
Hatairana ny an’ireo mpanamboatra trano iray etsy Andoharanofotsy, omaly maraina. Tokony ho tamin’ny 9 ora sy sasany teo, nahatsikaritra harona iray nafenina amina toerana takontakona tamin’ilay trano ireo mpiasa. Akory ny hagagana fa basy vita gasy iray sy bala miisa simy ny hita tamin’ny fanokafana izany. Teo no ho eo ihany, nampandrenesina ny tompon’ilay trano. Ity farany indray no nampahafantatra ny tranga amin’ireo polisy eny Tanjombato. Tonga nijery izany ireo mpitandro filaminana ary nanokatra fanadihadiana mahakasika ny raharaha. Nogiazana ao amin’ny « poste de police » ao Mahabo Andoharanofotsy kosa ilay basy. Henintsoa HaniL’article Andoharanofotsy: trano an-dalam-panamboarana nahitana basy sy bala a été récupéré chez Newsmada.
Halatra tao amina hotely lehibe iray: mpandraharaha fonja efa voaroaka ny iray amin’ireo jiolahy
Jiolahy dimy voasambotra noho ny fandrobana ny biraon’ny filoha tale jeneralin’ny hotely lehibe iray eto an-dRenivohitra. Mpandraharaha fonja ny iray amin’ireo.Tra-tehaky ny polisy, ny talata teo, ireo dimy lahy tompon’antoka tamin’ny famakiana biraon’ny filoha tale jeneralina hotely lehibe iray eto an-dRenivohitra, ny alin’ny 27 septambra lasa teo. Miisa dimy ireo mpanao asa ratsy voasambotra. Nisy tamin’izy ireo ny mpandraharaha fonja efa voaroaka. Mbola misy koa jiolahy mpamerin-keloka. Very tamin’izany ny entana mitentina 10 tapitrisa Ar.Araka ny fantatra, mody maka « chambre » ireo jiolahy hahafahany manao ny asa ratsy. Tsy voavakin’ireo jiolahy anefa ny « coffre » tao amin’ilay birao, isan’ireo saika hovakiny. Rehefa tsy vitany izany, ireo entana hafa indray no nobatain’izy dimy lahy. Isan’izany ny « unité centrale caméra ». Nambaran’ny loharanom-baovao iray fa nisy ny firaisana tsikombakomba amin’ireo mpiasan’ny hotely. Antony nahamora ny asa ratsy. Taorian’ny fampanoavana natao azy dimy lahy, nampidirana vonijmaika am-ponja ireo olon-dratsy. Henintsoa HaniL’article Halatra tao amina hotely lehibe iray: mpandraharaha fonja efa voaroaka ny iray amin’ireo jiolahy a été récupéré chez Newsmada.
Maevatanàna: jiro avy amin’ny solika sy masoandro
Mihatsara ny famatsiana herinaratra ao an-tampon-tanànan’i Maevatanàna, faritra Betsiboka. Efa miasa ny iray amin’ireo toby mamokatra herinjiro miisa roa any an-toerana, manana tanjaka 160 KW. Angovo miaraka ampiasaina mampihodina azy ny solika sy ny avy amin’ny masoandro. Ampy tsara ho an’ny mpanjifa ny vokatra satria mamokatra 804 KW raha toa ka 724 KW ny filana amin’ny fotoana be mpampiasa herinaratra.Eo an-dalam-pametrahana kosa ny toby faharoa, vao mainka hampitombo ny herinaratra vokarina any an-toerana, ka ho foana tanteraka ny fahatapahan-jiro any Maevatanàna.Anisan koa ananganana toby mamokatra herinaratra avy amin’ny solika sy ny masoandro ny any Andranotakatra, kaominina Belobaka, distrika Mahajanga. Naorina amin’ny velaran-tany 42 ha, manana tanjaka 17 MW. Manangana azy ny orinasa tsy miankina Mada Green Power. Ho vita amin’ny faran’ny volana febroary 2021 ny dingana voalohany, manana tanjaka 1,2 MW. Hatao amin’ny dingana faharoa ny 10,8 MW ary fahatelo ny 5 MW. Ho vita amin’ny faran’ity taona 2021 ity ny asa rehetra. Hampifandraisina amin’ny tambajotran’ny Jirama ny herinaratra. Njaka A.L’article Maevatanàna: jiro avy amin’ny solika sy masoandro a été récupéré chez Newsmada.